Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
သင့် ဦး နှောက်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုဟူသောအမည်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာအကြောင်းပါ။ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းသောပြrelatedနာများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်အမျိုးသားများပါ ၀ င်သည့်အဖွဲ့၏အားထုတ်မှုဖြင့်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းကိုကွယ်လွန်သူဂယ်ရီ Wilson ကအငြိမ်းစားခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ရောဂါဗေဒဆရာ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။
YBOP admins များကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ. သင့်ရဲ့အခြေအနေတိကျတဲ့ YBOP စီမံခနျ့ခှဲသူမေးခွန်းများကိုမမေးကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး။ YBOP ဆေးဘက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွံဉာဏျရှာဖွေရေးမှာသို့မဟုတ်ပေးမထားဘူး။ မြင် porn ဖြတ် နှင့် ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများနှင့်အတူအကူအညီတောင်း။
1) ဘာသာရေးကိုဤ site ကိုလား?
Nope ။ ဆိုက်ကိုတည်ထောင်သူသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီနှင့်နိုင်ငံရေးအရလစ်ဘရယ် (သူ၏မိဘများနှင့်အဘိုးအဘွားများကဲ့သို့) ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြည့်ရှုပါ ဂယ်ရီ Wilson က၏ 2016 အင်တာဗျူး နောဧသည်ခဘုရားကျောင်းသည်။ ဒါ့အပြင်စောင့်ကြည့် ဒီ 2019 အင်တာဗျူး ဘယ်မှာ Gary & Mark Queppet အဆိုပါဆွေးနွေးရန် အသရေဖျက်မှုနှောင့်ယှက် by porn သိပ္ပံငြင်းပယ် သူသည်ဂယ်ရီကိုရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ (အစ ဒီမှာ, မိနစ် 28 မှာ။ )
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဂယ်ရီသေဆုံးခဲ့သည်: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ သငျသညျမိမိအအောက်မေ့ဖွယ် site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအပေါ်မှတ်ချက်ထားခဲ့ချင်လျှင် https://www.garywilson.life/.
2) မည်သူမဆို YBOP ကနေငွေရှာပါသလား?
Nope ။ ထံမှရရှိသော ဂယ်ရီ Wilson ၏စာအုပ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသွားပါ။ ဂယ်ရီ Wilson ကစကားပြောရန်အခကြေးငွေလက်ခံခဲ့သည်။
ယင်းကားအဘယျ 3) အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်သုတေသနပြု၏လက်ရှိပြည်နယ်?
porn / sex စွဲ? ဒီစာမျက်နှာကိုစာရင်းပြုစုထားတယ် 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ။ သူတို့တွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်သူတို့ကစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည်။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 33 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများ) ။ စာမျက်နှာနှင့်သီးခြားစီ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 15 လေ့လာမှုများ.
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအ7အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ (အမျှဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု။ ) လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကအမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာဖော်ပြသည် do ဆိုးကျိုးများကိုအစီရင်ခံပါ arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ
porn နှင့် sexism
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 40 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
"? ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချမထားပါဘူး" ဘယ်သူမျှမက, မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားမကြာသေးမီနှစ်များတွင်မြင့်တက်ပြီ: "မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့်လျစ်လျူရှု။ " ဒီကိုကြည့်ပါ ကျော်များအတွက်စာမျက်နှာ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊ ထို့အပြင်မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရရှိခြင်းသည်မုဒိမ်းမှုနှုန်းကိုကျဆင်းစေသည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုများဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 280 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောလူငယ်များနှင့်ပတ်သက်သောစာပေ၏ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ - ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 17။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်စာပေများတွင်ထင်ရှားကြောင်းအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်သည်ဤဆက်ဆံရေး elucidate ဖို့အားထုတ်မှုရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သုတေသီများဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများ t ကိုအကြံပြုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးသောလူငယ်များသည်လက်တွေ့မကျသည့်လိင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရခွင့်ပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုပုံဖော်ထားသောတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အားလုံးလေ့လာမှုများဆက်စပ်မှုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော Nope: လေ့လာမှု ၉၀ ကျော်ကအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်လက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသသည်။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် Paul Wright, PhD သည် Porn သုတေသီများ၏မေးခွန်းထုတ်စရာနည်းဗျူဟာများ (၂၀၂၁), porn အပေါ်ပေါများ longitudinal သုတေသန၏တင်သွင်းမှုကိုဆွေးနွေးထားတဲ့။
အဆိုပါ naysayers Debunking
ပွိုင့်ခြင်းနှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုကဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ပြောနေတာနီးပါးတိုင်း naysayer တစ် debunking များအတွက်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က.
ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ , 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲထောက်ပံ့ 50 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ်.
4) ဂယ်ရီ Wilson ကအဆိုပါသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေထုတ်ဝေရှိပါသလား
Nope ။ သော်လည်း သင်စာနယ်ဇင်းများတွင်မြင်စေခြင်းငှါမလုပ်ပဲအဲဒီမှာမရှိကြပေ။ ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson က (ထိုနှစ်ခုချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုများအပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျသံမဏိ et al။ , 2013 နှင့် Prause et al ။ , 2015): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
တကယ်တော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ယခု တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါရှိသည် porn စွဲသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ " ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုပြီးဆုံးပါပြီ
6) ဆရာဝန်များနှင့်ကုသ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဆက်ဆံပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ ဤစာမျက်နှာကို ညစ်ညမ်းသော ED နှင့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးခြင်းကိုအောင်မြင်စွာကုသနိုင်ခဲ့သည့်ကျွမ်းကျင်သူများ (ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပါမောက္ခများ၊ ရောဂါဗေဒပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ လိင်ပညာရှင်များ၊ MDs) ၁၅၀ ခန့်နှင့်ဆောင်းပါးများနှင့်အင်တာဗျူးများပါ ၀ င်သည်။
7) အင်တာနက်ကို porn ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းအဘို့အ YBOP လား?
8) အဘယ်ကြောင့် YBOP ဖန်တီးခဲ့သလဲ
ကျနော်တို့လူတွေမိမိတို့ခွအေနမြေားကိုတိုးတက်အောင်အရေးပါသတင်းအချက်အလက်အားနည်းနေရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလိုအပ်ဘဲခံစားနေရပြီးမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ site ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အနှိမ့်ချကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း။ ~ လီလီယို